Yonke ukunambitheka kanye isabelomali iholide - ukuzilibazisa endaweni "Novoaleksandrovo"
Cishe ngaphakathi ukuhamba ibanga yenhloko-dolobha liyoba yindawo kakhulu ukuba uphumule nomndeni noma abangani. Ogwini Klyazma umema izivakashi Phumula Area "Novoaleksandrovo". Lokhu 4.5 ehektheleni evuthiwe ingqalasizinda ezidingekayo, futhi amakhilomitha ayisikhombisa nje kusukela eMoscow Ring Road.
Modern comfort zone
imingcele yamanje Klyazma khona kusukela ngo-1937. Sahlela ngoba ungaphazanyiswa yokuphakela amanzi dolobha, ukuze silondoloze ezingeni oyifunayo yamanzi UMfula iMoscow nemisebenzi emifula Shodnenskaya.
Namuhla ogwini Klyazma kwesigubhu - a iholidi edumile kakhulu. Kukhona ihlelwe eziningi izindawo fun ehlobo, ubambe imihlangano emikhulu noma beyodoba. Ngezikhathi zasehlobo ogwini inikeza inala amathilomu, amahhotela, yacht amakilabhu, zokudlela, eziteshini amanzi ezemidlalo, nokunye. Kukhona ngisho anama zoo amancane. Kusukela umbono zezivakashi, ethandwa kakhulu kukhona "Khlebnikov" ukuzilibazisa isikhungo "Ziqu-zintathu" kanye nokungcebeleka endaweni "Novoaleksandrovo".
New iholidi - ke kuyiholide hhayi kuphela umzimba kodwa futhi umphefumulo. Lapha, thina banakekele induduzo lula izivakashi, kungakhathaliseki ubudala. Ngakho-ke, ngifuna ukubuyela lapha kaningi.
Shore backfilled isihlabathi, phansi sihlanza amanzi kucacile. Luhle imindeni nezingane ezincane - ukuzilibazisa endaweni "Novoaleksandrovo". Ukubuyekeza, ngenhlanhla, nomdlandla, abalandeli kwesokunxele njengoba lazy lolwandle ungenzi lutho, futhi imisebenzi yangaphandle. On yoke imikhawulo "Novoaleksandrovo", kuhlanganise yokupaka kanye nomsebenzi anganqamuki unogada okuthunyelwe, eduze kwamanzi - wababhukudi. Administration uqhuba nokuqapha okuqhubekayo quality amanzi.
Phakathi nezinyanga zasehlobo, izivakashi ayatholakala amanzi amaningi ezikhangayo: izingane ezolile futhi ingozi - abadala. Ngokwesibonelo, kukhona "Wave 4". Lokhu Uzalo emanzini ngezinyathelo kanye emikhombeni ezintweni ezingafanele. Noma mbhoshongo "-Aztec". Le ukhangwa wokusemanzini futhi ifana mbhoshongo nge ubuso eziyisithupha, okuyinto ahlelwe kuma-slides.
"Novoaleksandrovo" ukuzilibazisa endaweni enezinto eziningi sokuqasha noma yiphi impahla ogwini yezemidlalo. On endaweni pads ezimbili ezibekwe i-volleyball, ensimini ukuze mini-football ne-volleyball. Kukhona amatafula ping-pong, trampoline kanye nezinye izikhungo eziningi ezikhangayo. Kanye emadokodweni eziningana lezigodo ukuzilibazisa izoso noma izoso izinkampani ezincane.
It ihlelwe endaweni yezingane nge-slide, senhliziyo nokunye. Intengo for the ride kumaslayidi amanzi ruble 100 kuphela.
Kubantu abadala kukhona sina kumnandi: ugibele Jetski (izihlalo ezintathu), ithebhulethi (izihlalo ezimbili), Ukushushuluza amanzi kanye motor isikebhe (ama-ruble ayizigidi 10 ..).
"Novoaleksandrovo" (ukuzilibazisa endaweni), amanani awo wamangaza ngisho izivakashi onokuqonda kunazo, ukunikela ehlukahlukene iholidi lakho. Ukuze wenze lokhu, vula yokudlela esizeni, okuyinto cuisine oqavile European, kodwa Umpheki wesilisa izitsha ngokumangalisayo cuisine Japanese futhi Uzbek.
Kubathandi imimoya ibha.
Ziningi amaholide inkampani kungaba ukuqasha itende evulekile emikhosini (ukuze iqashwe angaba yizinkulungwane 60. Deda.). Iningi izivakashi amadili, kubonelelwa kakhulu ama ematendeni arched. Basuke embozwe isisitho selanga angangenwa manzi amhlophe, esivikela hhayi kuphela ilanga kuphela kodwa nazo umoya. Ngesicelo yekhasimende, setha odongeni esobala elikuvumela ubunyoninco ezungezile.
Ngamaholide enkulu ngokufaneleyo nangohlelo ngaphambi evumela ekuphathweni ukuletha iziphuzo zabo ezidakayo nezinto zokuhlanza ungababaleli izimali kulolu ukhokho.
Ngaphezu amadili ahlukahlukene kungenzeka ukuhlela yokubhalisa umshado umshado "Novoaleksandrovo" (ukuzilibazisa endaweni). Amanani for beqhuba imisebenzi edingekayo ukuze ucacise kwi website esemthethweni. Kuze kube yimanje, amanzi eyakhelwe platform okhethekile. Futhi kwisayithi, ungakwazi cela master, umbhalisi DJ.
Le ndawo ukuzilibazisa inikeza usizo ekuhleleni futhi siqhuba isakhiwo ithimba yimuphi umumo. Sezisungule oxhumana nabo Animators professional kanye ehamba phambili.
Njengoba isevisi ezengeziwe ahlinzekwa iqashwe umsindo, ukukhanya, isiqophi nezinye izinto ukuze busuku engingasoze.
Zonke amatende zitholakala ogwini futhi ukufinyelela komuntu ngamunye amanzi. Kukhona ithuba umeme oweta oqeqeshiwe.
"Novoaleksandrovo" ukuzilibazisa endaweni has a kuqashelwe yokupaka, izindlu zangasese, shower zokushintshela lolwandle.
Le ndawo nezihlalo ngokushesha okukhulu lalithandwa kakhulu hhayi nje umoya ohlanzekile namanzi, induduzo cosiness. I plus enkulu indawo ngokuwina "Novoaleksandrovo" (ukuzilibazisa endaweni). Kanjani ukuze baye khona? Kulula kabi! Ukuze Dmitrov onguthelawayeka (7 km kusuka eMoscow) ukuze Novoaleksandrovo emzaneni (lena ukuphela iphuzu amatekisi eziningi). Ngaphezu kwalokho, ngokuvumelana izimpawu eziningi kuya izindawo.
Leli sondo elikhulu likaFerris emhlabeni, kungakhathaliseki ukuthi wakha eMoscow?
Liyini iphuzu eliphakeme e-Australia? Futhi iyini aphansi?
Elbrus ehlobo. Nethezeka elaliphansi kwamagquma kweNtaba Elbrus ehlobo: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
Israyeli, Tiberias: incazelo, umlando, ezikhangayo kanye nokubuyekeza
Okwe-alimondi yayithandwa nail design: incazelo
Metro Tokyo: izici, amathiphu, izincomo
Hemiparesis kwesokunxele Emaceleni
Amaqiniso ethakazelisayo amabhere: incazelo kanye izici
Aleksandr Alymov: Biography KVNschikov